Tayo nuucee ah ayuu u baayahay wariyaha wanaagsan? | Somsoon
Home SAXAAFADA Tayo nuucee ah ayuu u baayahay wariyaha wanaagsan?
Hey’adaha ugu waaweyn ee ka shaqeya arrimaha warbaahinta, Mahcadyadda iyo Jaamacadaha lagu dhigo cilmiga warbaahinta ayaa sameeyay cilmi baarisyo xariir ah si ay salka ugu dhigaan tayadda laga doonayo wariyaha wanaagsan.
Si uu u noqoto xirsadle Saxafi ah oo dhageysteyaashu ku qancaan wuxuu u baahanyahay in uu yeesho tayadda aasaasiga ah ee wariyaha lagama maar maanka u ah.
Waa in uu aqoon fiican u leeyahay luuqadda uu wax ku tabinayo
Taasi waxay saxafiga u fududeyneysaa in uu si wanaagsan u dhexgalo ilo wareedyadiisa iyo in uu awood leeyahay in uu dadka wax fahamsiiyo, isaguna uu bulshadda dhexdeeda wax ka fahmi karo.
Adigoo u dhashay ayey barasho kaaga baatantahay luuqaddu, sababtoo ah waxaad dooneeysaa in aad wax gaarsiiyo dad kaa aqoon iyo khibrad badan, sidaas darteed waa in aad ugu yaraan ku qancin kartaa erayadda aad adeegsaneyso.
Waa in uu urin karaa warka
Micnuhu waa in uu wariyuhu warka ka dhex fahmi karaa xaaladaha aysan dadka caadiga ka dhex fahmi karin.
Qodobkaani waxaa uu sharaayaa sida ay muhiim u tahay in uu wariyuhu fahmi karo waxa u qalma in ay bulshadu ogaadaan.
“Waa in uu urin karaa” waxaa loola jeedaa in ay maxkaxdiisu u fahmeyso waxa war noqon kara sida sankiisuba u fahmi karo marka wax carfaya uu dareemo.
Saxafiga wanaagsan waa in uu leeyahay shaqsiyad dabiici ah oo uu ku go’aamin koro dhacdooyinka aan cid walba oo kale war ula muuqan.
Waa in uu war-gal yahay
Warkii shalay looma baahna marka aad wabaahinta ka shaqayneyso hadii aysan wax kasoo kordhin, sidaas darteed waa in saxafigu uu si dhow ula socdaa waxa ka jira deegaanka uu ka shaqaynayo.
Waa in uu war-gal yahay, waxaa loola jeeda, in uu saxufigu ka dharegsanyahay dhacdooyinka maalmihii lasoo dhafay ka jiray deegaanadda, hadii kale isaga ayaa u baahanaya in loo warramo, awoodna uma laha in uu dadka wax u sheego.
Wariyuhu waa in uu yahay caadil dhex-dhexaad ah
Cadaaladda iyo dhex-dhexaadnimaddu waxay lafdhabar u yihiin shaqadda wariyaha, hadii uu ka tanaasulo mid ka mid ah waxaa luminayaa aaminaadda iyo sumcadda warbaahinta.
Wariyaha wanaagsan waa in uu leeyahay adkeysi
Saxafi wanaagsan waxaa uu u baahanyahay in uu leeyahay awood uu shaqadda ku sii wadi karo marka ay xaaladuhu ku kalifayaan in uu shaqadda ka joogsado. Taas micnaheedu maahan naftaada halis geli.
Nafta saxafiga ayaa ka muhiimsan shaqadiisa balse waa in uu adkeysi u leeyahay in uu ku shaqeeyo xaaladaha cakiran.
Wariyahu waa in uu yahay qof wax dhageysta
Saxafiga tababarkiisu liito waxaa uu diiradda saara maqalka codadka balse ma dhageysto. In aad wax dhageysato iyo wax maqasho waa ay kala duwanyihiin.
In aad wax dhageysato waa in aad eray-eray ula socotaa codka qofka si uusan kuu dhaafin faham muhiim ah. Xirfadaani waxay muhiim tahay marka aad wareysi sameyneeyso.
In aad maskax soo jeeda wax ku dhageysato waa tayo muhiim ah oo lagu doorto saxafiga wanaagsan.
Wariyaha wanaagsan waa in uu awood u leeyahay indho-indhayn
Indha-indhaytu waa in uu maskax furan iyo si xirfadeysan wariyuhu u eego waxa hareerihiisa ka jira. Go’aan fiicaan ayaa ka dhasha indha-indheynta wanaagsan waxaana wariyuhu soo saari karaa faah-faahin ku filan qodob wareedka.
Suxufigu waa in uu ku qalabeysanayahay xirfad casri ah
Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa kordhaya casriyeynta qalabka warbaahinta, sidaa darteed waa in uu wariyuhu leeyahay xirfadaha kala duwan ee fududeeya isticmaalka qalabka warbaahinta.
Waxbarasho iskiis ah iyo tababarro ayaa u horseedi kara wariyaha in uu ka dhergo xirfadaha iyo aqoonta ay u baahantahay shaqadiisu.
Haka gaabin in aad kordhiso aqoonta shaqadaada. Haddii aad maalin walba qabato waxa aad taqaano waxaa kuu soo bixi doona natiijadii hore, aqoon cusub baro si aad u hesho natiijo cusub.
Article horeDab la damin la’yahay oo ka holcaya kaymaha California
Article socoda Taliye ku xigeenkii ciidamada ilaalada wadooyinka oo lagu dilay Gaalkacyo